Akwụkwọ Larizza de Vera na Martech Zone
Edemede site na Larizza de Vera
Larizza bụ onye edemede na-enweghị akwụkwọ bi na Philippines. O dere ọtụtụ akụkọ maka akwụkwọ akụkọ Asia Journal, na nso nso a ka ọ rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu ọgụgụ isi nke nwere isi na Singapore na atụmatụ maka ịchụso ọrụ n'ọdịnihu na iwu IP.
N'ime afọ ole na ole gara aga, enwere mgbanwe dị ukwuu n'ụzọ anyị si eji ịntanetị maka ahịa dijitalụ. Anyị malitere site na ịmepụta weebụsaịtị naanị iji nweta data na ọrụ onye ọrụ. Na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ na oghere dijitalụ, ịnweta weebụsaịtị agaghị egbutu ya. Ndị na-ere ahịa dijitalụ aghaghị ịmalite egwuregwu ha iji wee pụta ìhè na mpaghara mgbanwe taa. Marketingre ahịa na ụwa dijitalụ dị iche na
Ahịa bụ ọrụ na-aga n'ihu. Ma ị bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ma ọ bụ obere azụmaahịa, ịre ahịa bụ ụzọ dị mkpa iji mee ka azụmaahịa na-aga n'ihu yana nyere aka mee ka azụmahịa kwalite ịga nke ọma. Yabụ na ọ dị mkpa ijide ma debe aha nke akara gị iji mepụta mkpọsa ire ere maka azụmaahịa gị. Mana tupu ha abịa na usoro mgbasa ozi ịre ahịa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịghọta n'ụzọ zuru ezu uru yana